Ungayilungisa kanjani i-compton ukugwema ukudlala kwevidiyo okukhethiwe | Kusuka kuLinux
Ungayisetha kanjani i-compton ukugwema ukudlala ividiyo okungaconsi phansi
Ungumsebenzisi we-Linux distro engasindi futhi uyayisebenzisa I-Xcompmgr ukuba nezinto zokubhala (okusobala, izithunzi, njll.)? Mhlawumbe, uhlupheka ngokusebenza kabi kwe-xcompmgr, umphumela wenani elikhulu lamaphutha eliwatholayo.
Amanye amaphrojekthi, azalwa njengezimfoloko ze-xcompmgr, akwazile ukuxazulula iningi lala maphutha futhi angeza nokuthuthuka okuphawulekayo. Kuyindaba ye- yemagazine futhi of i-compton, ikakhulukazi eyokugcina.
Ividiyo ejwayelekile yokugunda
2 Kusetshenziswa i-glx rendering engine
3 Ukudlala amavidiyo
Ukufakwa ku-Arch nakokuphuma kokunye:
Ukulungiselela i-compton, vele uhlele ifayela .config / compton.conf.
Kusetshenziswa i-glx rendering engine
Kade ngisebenzisa iCompton isikhathi eside njengokufaka esikhundleni se-xcompmgr. Kodwa-ke, noma iCompton yenze kangcono kakhulu kune-xcompmgr, ukudlala ividiyo kwe-HD bekusekuncane kuManjaro wami okhanyayo nge-LXDE. Kukhona okungahambanga kahle.
Yilapho engathola khona ukuthi iCompton iza nezinjini ezimbili ezinikezayo: lehle y glx (esebenzisa opengl). Akunasidingo sokusho, imoto ye-glx ishesha KAKHULU kune-xrender. Yize kusesesigabeni "sokuhlola", okungenani kimi kwavela ukuthi bekuzinzile impela.
Ukuze usebenzise i-glx udinga ukwenza ushintsho kufayela lokumisa.
Ekupheleni kwefayela, kufanele sengeze:
Kungenzeka ukwengeza ezinye izinketho zokumisa ezilifanela kangcono icala lakho. Labo abafisa ukufunda ukumisa kahle iCompton, ngiphakamisa ukuthi ubheke ifayela le- I-Arch wiki futhi kuya Compton wiki. Lapho uzothola imininingwane ebaluleke kakhulu.
Ifayela lami lokuhlela eliphelele leCompton lasala kanjalo.
Ukuze ubone ushintsho, kufanele uqale kabusha i-compton. Lokhu kufezwa kanjena:
Bese, ucindezela u-Alt + F2 bese ufaka i- "compton" (ngaphandle kwezilinganiso).
Okokugcina, bekufanele ngenze ushintsho oluncane kwisidlali sami sevidiyo (i-SMPlayer) ukuze ngizisebenzise ngokugcwele izinguquko ezenziwe eCompton.
ngiye Izinketho> Okuncamelayo> Ividiyo> Isishayeli exit wakhetha inketho gl. Njengoba kunconyiwe kwi-Compton wiki, uma ikhadi lakho liyayisekela kungcono ukuyisebenzisa VDPAU. Ikhadi lami le-nVidia lidala kancane ngakho-ke bekufanele nginamathele nge-gl.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungayisetha kanjani i-compton ukugwema ukudlala ividiyo okungaconsi phansi
Okuthunyelwe okuhle kakhulu. Bengingenankinga ngevidiyo, kepha angitholanga ndlela yokwenza ikhonco lami lisebenze kahle noCompton.
Ukuxazulula le nkinga, ngincoma ukuthi ufunde
Ngiyabonga kakhulu ngizobheka.
kungenzeka ukuthi uyisebenzise ku-gnome?
Isixhumanisi sefayela lakho lokumisa siphansi.
Isebenza kahle ... zama futhi.
Abasebenzisi be-amd, uma usebenzisa umshayeli wamahhala, konke ukuphuma kwe-xv ne-opengl kuzobonakala ngaphandle kokudwengulwa futhi i-chrome flash nayo izobonakala, ngoba isebenzisa i-vsync yayo (yona esebenzisa i-firefox ayisebenzisi), yize ukuhamba kwamawindi kuzodingeka ukudwengula.
Uma usebenzisa umshayeli ovaliwe, mane uchofoze ukukhipha izinyembezi kuphele lapho, bese ngokuhlanganisa kusebenze okusobala njll.
Ntambama, angilitholi ifayili lokumiswa kweCompton, ngivela kwaManjaro Xfce… Ukuze ngisebenzise iCompton ngingena ngemvume ngomyalo, ngakho-ke angikaze ngifune leli fayela lokumisa…
~ / .config / compton.conf noma ~ / .compton.conf, womabili awekho noma awanalutho ... Ngiyaluthanda noma yiluphi usizo ...
Kuyamangaza ... lezo yizindawo ezi-2 lapho zivame ukugcinwa khona.
Ngokufanayo, bekungeke kumangaze ukube bekungekho. Kufanele uyidale. 🙂
Yebo, ngiyidale ngaphakathi / ekhaya ngokucushwa okusho lapha futhi ngiyethula nge-compton -b. Akukho ukudabuka lapho ngihambisa iwindi, akubonakali uma ngibuka amavidiyo nge-inthanethi, kepha uma ubuka amavidiyo we-HD kubukeka ngendlela efanayo. Ngine-VLC kepha ngikhetha i-openGL njengokukhipha kubukeka ngendlela efanayo. Ithuthukisa kakhulu, kepha impela kuzofanele ngenze okunye ukumisa ...
Mhlawumbe. Ku-VLC angizange ngivivinye.
Futhi, ngincoma ukuthi unike amandla i- "hardware decoding" ku-VLC futhi ukhubaze imibhalo engezansi ye-SAA (noma into enjalo, angisalikhumbuli igama).
Jamin Fernandez (@Jamin Fernandez) kusho
Sawubona umbuzo, kungaba yini inqubo yokuyifaka kuXubuntu 14.04?
Phendula kuJamin Fernandez (@JaminSamuel)
Okokuqala, kuzofanela ukhubaze umqambi wewindi we-XFCE bese ufaka i-compton (ngesikhungo sesoftware noma nge-sudo apt install compton).
Ekugcineni, ukuze uyiqale, vele uthayiphe u- "compton" (ngaphandle kwezilinganiso) esigungwini.
Ngikushiya lesi sixhumanisi (ngesiNgisi) engicabanga ukuthi singasiza kakhulu: http://duncanlock.net/blog/2013/06/07/how-to-switch-to-compton-for-beautiful-tear-free-compositing-in-xfce/
Ukufaka i-Debian kusuka kwenye i-Distro usebenzisa i-Debootstrap
Ukubuyekeza: isonto ngeFirefox OS